Fanendrena minisitra Nivoaka sempotra ny filoha sy ny praiminisitra
Mandra-pahatongan’ny 2023 Hangotraka ny fanoherana
Azo antoka ny hihamafisan’ny fanoherana ara-politika hatramin’ny taona 2023, raha tsy misy ny fipoahana ara-politika na toe-javatra goavana mety hiseho mialohan’izay.
Pr Mangalaza Eugène “Mbola hihavana i Ravalomanana sy Rajoelina”
Nivoaka tamin’ny fahanginany tamina fandaharan’ny fahitalavitra tsy miankina iray omaly ny Praiminisitra teo aloha Atoa Mangalaza Eugène.
Mpitondra fanjakana Tsy mihorohoro amin’ny hetsika politika raha mamim-bahoaka
Miezaka mafy misakana ny mety hisiana hetsika politika eto amin’ny firenena ny Fitondram-panjakana ankehitriny. Nosakanana ny hetsiky tamina toerana manokana tsy miankina tany Mahajanga, ary rakotra mpitandro filaminana ny tanàna.
Tolona amin’ny tsy fananan-tsata Miandrandra ny depiote ireo lasibatra
Lavitra ezaka ny tolona amin’ny tsy fananan-tsata eto Madagasikara na ny “apatridie”,
Loholona sy Fanjakana foibe Ho raikitra ny ady ny farany
Nanamafy ny teo anivon’ny Antenimierandoholona ho tohin’ny fanambarana efa nataony ny 07 oktobra, fa mbola tratry ny ankivy ara-bolan’ny Minisiteran’ny vola sy ny tetibola amin’ny tokony hamoahana ny vola hoenti-miasa eo anivon’io andrim-panjakana io.
Gerard Ramamimampionona “Mila manorina ny firenena isika …”
Avy nankalaza ny 62 taona niainana ny atao hoe repoblika isika ankehitriny, hoy ny filoha lefitry ny komitin’ny fampihavanana Malagasy, Gerard Ramamimampionona.
Faritra faha 23 Miha sarotra ny raharaha
Aza afangaro ny fomban-drazana sy ny raharaha politika, hoy ny raiamandreny avy any Nosy varika, faritr’i Vatovavy fitovinany, Paul Ramandimbison, manoloana ny resabe mikasika ny faritra faha 23. Manana soatoavina manokana ny Tangalamena, hoy izy.
Omaly maraina no nahazo fampiantsoana ny mpanao gazety fa mila tonga eny amin’ny lapam-panjakana Iavoloha amin’ny 3 ora sy sasany tolakandro fa hivoaka ny anaran’ireo mpikambana eo anivon’ny
governemanta. Tamin’ny 5 ora sy sasany anefa vao nanomboka ny fotoana nanambarana ireo mpikambana 24 mianadahy ao anatin’ny governemanta Ntsay. Fantatra araka ny fikaroham-baovao fa efa tamin’ny 4 ora vao vita ny fivoriana manodidina ity fanendrena minisitra ity omaly maraina. Mialoha io fotoana omaly tolakandro io aza dia mbola maromaro ireo minisitra no niresaka manokana tamn’ny filoham-pirenena sy ny praiminisitra teny Iavoloha, ka izay no mety nahatara ny fanombohan’ny fotoana. Tazana teny amin’ny endriky ny filoha Rajoelina sy ny praiminisitra Ntsay omaly fa mafy ny asa natrehana ary mety tena nangotraka ny adihevitra, izay vao teraka ity governemantan’ny taona 2020 ity. Nisy mantsy ireo minisitra nesorina, tao koa ireo azo ambara hoe nilatsaka grady, satria nanesorana ny andraikiny, toa an’i Hajo Andrianainarivelo izay tsy hiandraikitra intsony ny Trano fonenana sy fanorenana tanàna fa nomena ny minisitra lefitra vaovao io departemanta hisahana ny resaka Tanamasoandro sy ny fananganana “building” io. Na dia efa nahoraka be aza ny hidirian’ny olona avy amin’ireo antoko politika dia tsy nisy izany fa manampahaizana sy teknisianina ny maro an’isa tamin’ireto minisitra ireto. Azo antoka fa henjana ny fifandresen-dahatra teo amin’i Andry Rajoelina sy ireo mpiara-dia politika aminy sy nanohana azy fony izy kandida, mba handeferan’izy ireo ka tsy nahatafidirany olona tao anaty governemanta.